DOWNLOAD MPAMILY HO AN'NY SAMSUNG RV520 - MPAMILY - 2019
Ahoana no fandefasana mpamily ho an'ny laptop Samsung RV520
Tsy misy solosaina afaka miasa tsara raha tsy misy rindrambaiko. Tsy ny fampisehoana ny fitaovana amin'ny ankapobeny, fa ny mety ho vokatry ny fahadisoana samihafa mandritra ny fandehanany dia miankina amin'ny fisian'ireo mpamily. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hijery fomba fanao izay ahafahanao maka sy mametraka rindrambaiko ho an'ny laptop Samsung RV520.
Variana amin'ny fametrahana mpamily ho an'ny Samsung RV520
Manomana fomba maro hanampiana anao hametraka mora foana ny rindrambaiko ho an'ny modely an-tsoratra voatonona teo aloha. Ny sasantsasany amin'ireo fomba fiasa omenao dia midika ny fampiasana programa manokana, ary amin'ny toe-javatra sasany dia azonao atao amin'ny fitaovana maoderina. Andao hijery akaiky ny tsirairay amin'ireo safidy ireo.
Fomba 1: Website Samsung
Araka ny hevitr'ilay anarana, amin'ity tranga ity dia mila mifandray amin'ny loharanom-baovao avy amin'ny mpanamboatra solosaina isika ho fanampiana. Eto amin'ity loharano ity no hitadiavantsika rindrambaiko amin'ny fitaovana Samsung RV520. Tsy maintsy tadidinao fa ireo mpamily maimaim-poana avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny mpamokatra herinaratra no tena azo antoka sy voaporofo amin'ny fomba rehetra misy. Ireo fomba hafa tokony horesahina aorian'izany. Miasa mivantana avy hatrany amin'ny famaritana ilay hetsika izahay.
Araho ny rohy mankany amin'ny pejy voalohan'ny tranonkala ofisialin'i Samsung.
Ao amin'ny faritra havanana ambony amin'ny pejy misokatra dia hahita ny fizarana ianao "Support". Tsindrio ny rohy amin'ny endrika ny anarany.
Ny pejy manaraka dia mila mahita sehatra iray ianao ao amin'ny foibe. Ao amin'io tsipika io dia mila miditra ny anaran'ny vokatra modely Samsung izay mila rindrambaiko. Mba hahitana ny valin'ny fikarohana araka izay azo atao, midira ny sandanyRV520.
Raha toa ka miditra ny sanda voalaza, dia hiseho eto ambany ny lisitry ny valiny mifanandrify amin'ilay fangatahana. Mifidiana ny modely findainao avy amin'ny lisitra ary tsindrio ny anarany.
Mariho fa amin'ny faran'ny anarana modely misy marika hafa. Ity fametrahana ny kitapo feno solosaina finday iray, ny fametrahana azy ary ny firenena izay namidy azy. Azonao atao ny mamantatra ny anaran'ny modelinao, raha mijery ny labozia ao ambadiky ny kahienao ianao.
Rehefa ajanona ny modely tianao ao amin'ny lisitra miaraka amin'ny valin'ny fikarohana, dia ho hitanao eo amin'ny pejin-tranonkala teknika. Ny fampahalalana eto amin'ity pejy ity dia ampiharina amin'ny modelin'ny RV520 izay tadiavinao. Ireto misy valiny momba ireo fanontaniana fototra, torolalana ary torolalana. Mba hanombohana fampidinana rindrambaiko, mila midina eto amin'ity pejy ity ianao mandra-pahitanao ilay sokajy mifanaraka aminy. Antsoina izy - "Downloads". Eto ambany ny sakana ho toy ny bokotra iray "Jereo bebe kokoa". Tsindrio eo.
Rehefa manao izany ianao, dia hahita lisitry ny mpamily rehetra azo alaina ao amin'ny laptop Samsung RV520. Indrisy anefa fa tsy afaka manondro aloha ny dikan 'ny rafitra miasa sy ny vavolombelony ianao, noho izany dia tsy maintsy mitady fikarohana amin'ny rindrankajy miaraka amin'ireo fepetra ilaina ianao. Arakaraky ny anaran'ny mpamily tsirairay dia hahita ny dikanteniny, ny haben'ny rakitra fametrahana, ny OS manohana ary ny halavany. Ankoatra ny andalana tsirairay miaraka amin'ny anaran'ny rindrambaiko dia hisy bokotra iray "Download". Amin'ny fampidirana azy, ianao maka rindrambaiko voafantina amin'ny solosaina findainao.
Ny mpamily rehetra ao amin'ilay tranonkala dia aseho amin'ny endrika tahiry. Rehefa ampakarina ity tahirin-kevitra ity dia ilaina ny manaisotra ireo rakitra rehetra ao anatin'io rakitra io. Any amin'ny faran'ny fizotran'ny doka dia mila mandeha any amin'io ordinatera io ianao ary manamboatra rakitra antsoina «Setup».
Ireo dingana ireo dia ahafahanao manomboka ny programa fametrahana ho an'ilay mpamily efa voafaritra teo aloha. Avy eo, dia mila manaraka ny baiko sy toro-hevitra izay hosoratana ao amin'ny varavarankelin'ny Wizard amin'ny Installation ianao. Vokatr'izany dia afaka mametraka ny rindrambaiko amim-pahombiazana ianao.
Toy izany koa, mila miara-miasa amin'ny sisa amin'ny rindrambaiko ianao. Ilaina koa ny mandefa sy mametraka azy.
Amin'ity dingana ity, dia ho vita ny fomba famaritana. Raha te hianatra momba ny vahaolana sarotra momba ny olan'ny rindrambaiko ianao, dia manoro hevitra anao izahay fa mahazatra amin'ny fomba hafa.
Fomba 2: Samsung Update
Samsung dia namorona sehatra manokana izay miseho amin'ny anaran'ity fomba ity. Hamoaka azy ireo avy hatrany ny mpamily rehetra amin'ny solosaina findainao. Izao no tokony hataonao hampiasana ny fomba famaritana:
Mandehana any amin'ny pejin'ny teknikan'ny laptop izay mitaky rindrambaiko.
Amin'ity pejy ity, mila mahita bokotra misy ny anarana ianao "Rindrambaiko mahasoa" ary tsindrio eo.
Izany dia hamindra anao any amin'ny ampahany ilainao amin'ny pejy. Ao amin'ny faritra miseho, dia hahita sehatra iray miaraka amin'ny tolotra Samsung Update ianao. Ho eo ambanin'ny famaritana ity fampiasana ity dia bokotra antsoina "View". Mandrotsaka izany isika.
Ity dia hanomboka ny dingana fampidinana ny fampiasana efa nomena ny solosaina findainao. Voafidina ao anaty dikan-tahirin-tsarimihetsika. Ilainao ny manaisotra ny rakitra fametrahana ao amin'ny arisiva, ary avy eo dia araho izany.
Ny fametrahana Samsung Update dia tena, tena haingana. Rehefa mihazakazaka ny rakitra fametrahana ianao, dia ho hitanao avy hatrany ny varavarankely iray izay hanehoana ny fivoaran'ny fametrahana. Manomboka izy io.
Ao anatin'ny segondra vitsy monja dia ho hitanao ny varavarankely fanontana faharoa sy farany. Haneho ny vokatry ny fandidiana izany. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia mila clique fotsiny ianao «Close» mba hamitana ny fametrahana.
Any amin'ny faran'ny fametrahana dia mila mampiasa ilay rindrambaiko ianao. Azonao atao ny mahita ny fehiny eo amin'ny birao na ao amin'ny lisitry ny programa ao amin'ny sakafo. "Atombohy".
Ao amin'ny varavarankelim-pifaneraserana lehibe indrindra dia mila mahita sehatra iray ianao. Eto amin'ity sehatra ity, tsy maintsy miditra ny anaran'ny modely laptop, toy ny nataontsika tamin'ny fomba voalohany. Rehefa mody ilay modely dia tsindrio ny bokotra miaraka amin'ny endriky ny fitaratra. Mipetraka eo ankavanan'ny sehatry ny fikarohana izy.
Vokatr'izany, lisitra kely misy ny fanovana rehetra misy ny modely voatondro dia ho kely kokoa. Mijery ny lamosin'ny solosaina finday izahay, izay misy ny anaran'ny modely. Aorian'izany, mikaroka ny solosaina finday izahay ao amin'ny lisitra, ary kitiho ny bokotra ankavia amin'ny anarany.
Ny dingana manaraka dia ny mifidy ny rafitra miasa. Afaka miditra ao amin'ny lisitra izy, ary amin'ny safidy maromaro.
Rehefa mikitika ny tsipika miaraka amin'ny OS tianao ianao, dia hiseho ity varavarankely manaraka ity. Ao anatin'izany dia hahita lisitra misy mpamily izay misy amin'ny findainao ianao. Jereo ny boaty eo amin'ny ilany ankavia amin'ny rindrambaiko izay tianao hapetraka. Aorian'izany dia tsindrio ny bokotra "Export".
Amin'izao fotoana izao dia mila mifidy ny toerana izay halefa ny rakitra fametrahana ireo mpamily voamarina. Eo ankavia eo amin'ny varavarankely misokatra, tsindrio ny ordinatera ao amin'ny lahatahiry root, ary tsindrio ny bokotra "Select Folder".
Avy eo, manomboha ny dingan'ny famerenana ny rakitra ho azy. Ny varavarankely iray misaraka dia hiseho izay ahafahanao manara-maso ny fandrosoan'ny fandidiana.
Rehefa vita ny famoahana, misy hafatra miseho eo amin'ny efijery rehefa voavonjy ny rakitra. Azonao atao ny mahita ohatra iray amin'ny varavarankely tahaka ny sary etsy ambany.
Fenoy ity varavarankely ity. Avy eo, mandehana any amin'ny lahatahiry izay nandefasana ny rakitra fametrahana. Raha nisafidy mpamily maromaro ianao mba haka ny download, dia hisy lahatahiry maromaro ao amin'ny lisitra. Ny anaran'izy ireo dia mifanandrify amin'ny anaran'ny rindrambaiko. Sokafy ny ordinatera tianao ary hazavao ilay rakitra. «Setup». Vita fotsiny ny fametrahana ny raki-daza rehetra ilaina amin'ny solosainao amin'ny fomba toy izany.
Fomba 3: Fandaharam-pikarohan'ny rindrambaiko finday
Ny fikarohana sy fametrahana rindrambaiko amin'ny solosaina finday dia afaka mampiasa programa manokana. Mamoaka ny rafitrao izy ireo amin'ny fikarohana ireo mpamily efa antitra, ary fitaovana tsy misy rindrambaiko. Noho izany, afaka mandefa sy manamboatra ireo mpamily rehetra ianao, fa ireo izay tena ilainy amin'ny solosaina findainao. Ireo karazana fandaharana amin'ny Internet dia azo jerena betsaka. Noho ny maha-mora anao dia namoaka fanadihadiana momba ny rindrambaiko izahay, izay tokony hajaina voalohany indrindra.
Vakio bebe kokoa: Ny fandaharana tsara indrindra amin'ny fametrahana mpamily
Ny programa malaza DriverPack Solution. Azo takarina izany, satria manana mpihaino be mpampiasa io solontenany io, tahirin-tsarin'ny mpamily sy fitaovana matanjaka. Momba ny fomba fampiasana tsara an'ity programa ity mba hikaroka, maka download ary fametrahana mpamily, dia nolazainay tamin'ny iray tamin'ireo lesona teo aloha izahay. Manoro hevitra izahay mba hahaizanao mamantatra ny tenanao mba hijery ny nuances rehetra.
Lesona: Ahoana no fomba fanavaozana ny mpamily amin'ny solosainao amin'ny fampiasana DriverPack Solution
Fomba 4: Hardware ID
Ity fomba ity dia manokana, satria azo antoka fa hamela anao hitady sy hametraka rindrambaiko, na dia ho an'ny fitaovana tsy fantatra ao amin'ny solosainao aza. Mba hanaovana izany, dia fantaro fotsiny ny hasarobidin'ny famantarana ny fitaovana toy izany. Ataovy tsotra izany. Avy eo, mila mampiasa ny sandoka hita amin'ny tranokala manokana ianao. Ireo tranonkala mikaroka rindrambaiko mampiasa laharana ID. Aorian'izany dia hampidina ilay mpamily voafantina ianao ary hametraka izany amin'ny solosaina. Ny fomba hahitana ny sandan'ny famaritana, sy ny tokony hatao momba izany, dia nofaritanay tamin'ny an-tsipiriany tamin'ny lesona iray samihafa. Natokana ho an'io fomba io izy. Noho izany, manoro hevitra ny hanaraka ny rohy eto ambany ianao ary hahafantatra azy io.
Lesona: Hitady mpamily amin'ny ID matihanina
Fomba 5: Standard Windows Tool
Amin'ny toe-javatra sasany dia azonao atao ny mampiasa ny fitaovan'ny fikarohana ao amin'ny rafitra miasa. Izany dia mamela anao hikaroka sy hametraka rindrambaiko ho an'ny fitaovana raha tsy manamboatra programa tsy ilaina. Marina fa manana ny tsy fahombiazany io fomba io. Voalohany indrindra, ny vokatra tsara dia tsy vita foana. Ary amin'ny faharoa, amin'ny tranga toy izany dia tsy misy fitaovana rindrambaiko fanampiny napetraka. Ny solosaina fototra tsotra no napetraka. Na izany aza dia ilaina ny mahafantatra momba io fomba io, satria ireo mpamily ho an'ny mpanara-maso ihany no miorina amin'ny fampiasana io fomba io. Andeha hojerentsika ny hetsika rehetra amin'ny antsipiriany.
Ao amin'ny birao, mikaroka sary "Ny Computer" na "Ity ordinatera ity". Tsindrio eo amin'ny bokotra ankavanana. Ao amin'ny menu menu, select the line "Management".
Ao amin'ny varavarankely misokatra, kitiho ny tsipika "Manager Manager". Eo amin'ny lafiny ankavia amin'ny varavarankely izany.
Momba ny fomba fanombohana rehetra "Manager Manager" Afaka mianatra amin'ny lesona manokana ianao.
Lesona: Sokafy ny "Manager Manager"
Vokatr'izany dia hahita varavarankely ahitana lisitry ny fitaovana rehetra mifandray amin'ny solosainao ianao. Mifidiana fitaovana izay takiana amin'ny mpamily. Tsindrio ny anarany miaraka amin'ny bokotra ankavanana. Avy amin'ny sakafo misokatra, mifidiana ny singa voalohany - "Mpitety vaovao".
Ireo hetsika ireo dia ahafahanao manokatra varavarankely ahitana safidy ny karazana fikarohana. Afaka misafidy ianao "Automatic" search and "Manual". Amin'ny tranga voalohany, ny rafitra dia hiezaka ny mitady sy mametraka ny rindrankajy manokana, ary amin'ny fampiasana azy "Hand" Mitadiava dia tsy maintsy manondro ny toerana misy ny rakitra mpamily ianao. Ny safidy farany dia ampiasaina indrindra hametrahana mpamily mpanara-maso ary hanafoanana ny fahadisoana isan-karazany amin'ny fampiasana fitaovana. Noho izany dia manoro hevitra isika "Fikarohana automatique".
Raha hita avy amin'ny rafitra ny rakitra rindrambaiko, dia hametraka azy ireo avy hatrany.
Amin'ny farany dia ho hitanao ny varavarankely farany. Haneho ny vokatry ny fikarohana sy fametrahana azy io. Tadidio fa mety tsy hahomby foana izany.
Tsy maintsy manakatona ny varavarankely farany fotsiny ianao mba hamitana ilay fomba famaritana.
Nanjary nifarana ity lahatsoratra ity. Nambaray taminareo araka izay tratra ny fomba rehetra izay ahafahanao mametraka ny rindrambaiko rehetra ao amin'ny laptop Samsung RV520 tsy misy fahalalana manokana. Manantena amim-pahatsoram-po isika fa ao anatin'ity dingana ity dia tsy hanana fahadisoana sy olana ianao. Raha mitranga izany - dia soraty amin'ny fanehoan-kevitra. Andao hiezaka ny hamaha ireo olana ara-teknika izay niseho raha toa ka tsy mahomby amin'ny tenanao manokana.
https://termotools.com mg.termotools.com © Mpamily 2019